Tsy hianareo no nifidy Ahy. Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hitondra voa tsara ao amin'ny fiainanareo, voa izay haharitra.1
Nisy lehilahy iray izay nanan-janaka lahy roa. Hoy izy tamin'ilay zokiny: " Mandehana anaka miasa any amin'ny tanim-boaloboko anio."
"Tsy handeha aho," hoy ilay zanany; kanjo taty aoriana dia nisy fiovam-po teo aminy, ary nandeha niasa tany an-tsaha izy.
Avy teo niteny tamin'ilay zanany faralahy ny rainy: "Hianao koa mandehana any an-tsaha."
Tonga dia namaly izy hoe: "Handeha aho." Nefa nijanona tao an-trano izy, ary tsy noraharahahiany ny baikon'ny rainy.
Iza amin'ireo zanaka roa ireo no nahatanteraka ny baikon'ny rainy?
Nahoana no hataonareo hoe tsara Aho, raha tsy mino hianareo fa izaho no Andrimanitra? Fantatrareo ny didy: Aza mijangajanga; Aza mamono olona; Aza mangalatra; Aza mijoro vavolombelona mandainga; Hajao ny rainao sy ny reninao. Ataovy izany, dia hahazo harena any an- danitra hianareo. Kanefa ity no mampianjera anareo dia ny fanajana Ahy amin'ny teninareo fotsiny ihany, fa tsy amin'ny fampiasana ny zava-drehetra - dia ny harenanareo sy ny fanànanareo, ary ny fiainanareo - mba hanampiana ireo izay sahirana.2
Raha maniry ny hanaraka Ahy hianareo, dia tsy maintsy avelanareo ny filànareo sy ny fomba fiainanareo feno fitiavan-tena. Afoizo izany ary manaraha Ahy. Fa ireo izay maniry hanana fiainana mandrakizay dia tsy maintsy mamela ny fiainany taloha. Izay rehetra manao izany ho Ahy no hahita fiainam-baovao - sady ety an-tany no any an-danitra.3
Indray mandeha izay, nisy mpanjaka nikarakara fanasana ho an'ny fanambadian'ny zanany, ilay zanak'andriana. Rehefa vonona daholo ny zavatra rehetra, naniraka ireo mpanompony ho any amin'ny faritany ivelan'ny fanjakany izy mba hampiantso ireo izay nasaina ho amin'ilay fanasana, kanefa nandà ny ho avy ireo vahiny.
Naniraka ny mpanompony ary ilay mpanjaka nilaza hoe: "Lazao amin'ireo izay nasaina amin'ilay fanasana, fa nanomana sakafo lehibe aho. Novonoina ny ombiko sy ny zanak'ombiko tsara indrindra, ary efa vonona daholo ny zavatra rehetra. Tongava amin'ilay fanambadiana."
Kanefa nohamaivanin'ny vahoaka koa ity fanasana ity, ary niverina tany amin'ny asany ry zareo, ny sasany any amin'ny sahany, ny sasany hafa any amin'ny raharahany any amin'ny tanàn- dehibe. Nosamborin'ireo izay nitaredretra taty aoriana ny mpanompon'ny mpanjaka ka novonoiny ho faty.
Nisafaoka noho ny hatezerana ilay mpanjaka rehefa nahare ny zavatra nitranga. Naniraka miaramila avy amin'ny lapany izy. Azon'izy ireo ilay mpamono olona, novonoiny ary nodorany ho fongotra ny tranony.
Hoy izy avy eo tamin'ny mpanompony: "Vonona ny fanambadiana, fa tsy mendrika ny hanatrika izany ireo izay nasaina. Mandehana ary, any amin'ireo olona izay hitanareo eny an-tsisin- dàlana sy eny amin'ny làlana ivelan'ny tanàna, ary asao izy ho tonga amin'ny fanasana amin'ny fampakaram-bady."
Lasa nankany amin'ny sisin-dalan'ny tanàna àry ny mpanompon'ilay mpanjaka, ary avy eo teny ivelany nanaraka ny làlana lehibe, ary nanasa izay rehetra nifanena taminy, na ny tsara na ny ratsy; ary dia fenon'ireo vahiny ireo ny efitrano malalaka hanaovana ilay fanasana amin'ny fampakaram- bady."
Niditra ny mpanjaka ny harivan'iny mba hijery ny vahininy. Tafintohina izy nahita olona iray mihinana eo amin'ny latabatra nefa tsy nanao ilay akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady izay efa nomena. Nanontany izy hoe: "Nahoana hianao no tonga amin'ity fety ity nefa hianao tsy manao ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady?" Fa tsy nahita havaly ilay lehilahy.
Hoy ilay mpanjaka avy eo tamin'ny mpanompony: "Afatory io lehilahy io ary esory eo izy." Hampiako an'izao: maro no nantsoina- ho any amin'ny fanjakana - fa vitsy no voafidy. Efa tonga ny fotoana. Efa vonona ny fanjakan'Andriamanitra. Niantso anareo hiala amin'ny fomba fiainan'izao tontolo izao Aho. Mibebaha, anaovy ny akanjon'ny famonjena, ary minoa an'ity vaovao mahafaly ity.4
Tsy misy olona afaka mankaty Amiko, raha tsy ny Ray izay naniraka Ahy no nisintona azy; ary hanangana izany olona izany Aho amin'ny andro farany. Hianareo rehetra izay nomen'ny Ray Ahy dia hanatona Ahy: ary na iza na iza manatona Ahy, dia tsy ho laviko mihitsy, na oviana na oviana.5
Satria efa nolazaiko anareo ny zavatra toy izany, mino ve hianareo? Marina tokoa, mbola hahita zavatra lehibe lavitra noho ireny hianareo.6
Noho izany midira ary amin'ilay vavahady tery; fa malalaka ny làlana, midadasika ny arabe mitondra any amin'ny fandringanana, ary be dia be ny mandeha amin'iny làlana iny; fa tery ny vavahady sy ny làlana izay mitondra any amin'ny fiainana, ary vitsy no mahita azy . Miezaha handeha any amin'ny vavahady izay mitondra any amin'ny fiainana. Indray andro, any, be ny olona te-hiova làlana tampoka ho any amin'ny làlana marina, kanefa ho tara loatra.7
NY AMIN'NY FAHATERAHANA FANINDROANY INDRAY
Aza gaga raha miteny Aho fa tsy maintsy hateraka indray hianareo.1
Marina tokoa, nilaza an'izany taminareo Aho: raha tsy ateraka indray hianareo, tsy afaka mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy ateraka amin'ny rano sy ny Fanahy Masina hianareo, tsy afaka hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra.2
Izay nateraka tamin'ny nofo dia nofo, ary izay nateraka tamin'ny Fanahy dia fanahy. Mitsoka eny amin'izay tiany hitsofana ny rivotra, ary henotsika ny feo ataony; fa tsy haintsika ny milaza avy aiza no nihaviany, na aiza no halehany. Ary sahala amin'izany ny amin'izay rehetra nateraky ny Fanahy.3
Diniho ireto ohatra ireto: Tsy misy manjaitra tapa-damba vaovao iray hanapenana akanjo tonta rovidrovitra, satria handrovitra ilay lamba tonta ilay vaovao napetaka taminy, ary vao maika hitatra ilay rovitra. Na koa, mametraka divay vaovao ao anaty barikan-divay antitra. Mety ho vaky ilay barika antitra, ho raraka ny divay vaovao, ary ho very ny fihariana. Fa izao no izy, ataovy anaty barika vaovao ny divay vaovao, amin'izay samy voatahiry izy roa.4
Ahoana ary ny amin'izany, manoloana ny fianarana be nataonareo no mbola tsy zatra ny tena fototry ny marina ihany hianareo? Raha niteny zavatra sahala amin'izany taminareo Aho, dia nampiasa ohatra ety an-tany, ary tsy mbola mahazo ihany hianareo, ahoana no hahazoanareo raha hilaza aminareo momba ny zavatra any an-danitra Aho?5
Tsy naniraka ny Zanany ety an-tany mba hanameloka izao tontolo izao Andriamanitra; fa mba hahatonga izao tontolo izao ho voavonjy amin'ny alàlany. Na iza na iza mino Azy dia tsy ho helohina, fa izay tsy mino Azy dia efa mijoro voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny Zanaka Lahy Tokan'Andriamanitra.6
Izaho no fitsanganana amin'ny maty sy fiainana. Izay rehetra mino Ahy, na dia maty eto amin'ity tany ity aza, dia ho velona indray. Homena azy ireo ny fiainana mandrakizay ary tsy ho faty izy! Impiry impiry moa no efa nolazaiko taminareo: Raha mino hianareo dia hahita ny voninahitr'Andriamanitra.7
Ny nanirahana Ahy dia ny hanatanteraka ny sitrapon'Ilay naniraka Ahy, ary hanatanteraka ny asany; ary izany no sitrapon'Andriamanitra: Mha hahatonga anareo hino marina tokoa ny Mesia izay nirahin'ny Ray.
Henoy ity tantara ity: Nisy lehilahy izay nanana zanaka roalahy. Indray andro hoy ilay zandriny tamin'ny rainy: "Dada a, omeo ahy ny anjara lovako." Dia nomen'ny rainy azy ny anjarany.
Tsy ela akory tao aorian'izay, nanangona ny fananany io zanany io, ary lasa nandeha tany an-tany lavitra tany. Nolanilaniany tany ny fananany tamin'ny fiainana tsy miraharaha na inona na inona. Rehefa lany tsy nisy tavela intsony ny volany na ariary aza, dia nisy mosary nanenika ny tany. Nahantra fadiranovana izy sady tsy nanana namana.
Farany, nahita asa hikarakara kisoa izy. Tao anatin'ny famoizam-po, efa handeha hihinana ny akoran-katsaka nomena azy mba hamahanany ny kisoa iny izy, no tonga saina, ka nieritreritra hoe: "Manana mofo ho hanina mihoatra lavitra noho ny ampy izao ny mpanompon'ny dadanay ary manana sisa betsaka aza; nefa izaho ity, sakafon'ny kisoa no saika hohaniko mba tsy ho faty! Andeha hiverina any amin'ny dadanay aho, ary izao no holazaiko azy: "Dada a, efa nanota taminao sy ny lanitra aho. Tsy mendrika ny ho antsoina hoe zanakao intsony aho, fa fara-faharatsiny ataovy mba ho isan'ny mpanompo karamainao."
Nitsangana avy eo amin'ny vovoka izy, izany fikasana izany no tao an-tsainy, ary nanomboka nandeha tamin'ilay làlana lavitra niverina ho any amin'ny rainy.
Mbola tery lavitra tery izy no nahita azy ny dadany, ary nangoraka azy, ka nihazakaza mba hitsena azy sy nanoroka azy amim-pitiavana.
Nanomboka niteny ilay zanany lahy hoe: "Dada ô, efa nanota tamin'ny lanitra sy taminao aho, ka tsy mendrika ny antsoina hoe zanakao intsony."
Kanefa tsy navelan'ny rainy ho vita akory ny fiaikeny ny fahotany fa nitodika tany amin'ny mpanompony ilay rainy ka niteny hoe: "Ento aty ny akanjoko tsara indrindra, ary ampiakanjoy ny zanako. Ataovy eo amin'ny tànany ny peratro fanaovako tombo-kase, ary ampidiro amin'ny tongony ny kiraroko tsara indrindra. Ento aty ny zanak'ombintsika matavy indrindra any an-tsaha, vonoy, ary andeha isika hihinana sy hifaly. Fa efa maty ity zanako ity fa velona indray; efa very izy fa hita indray izao." Ora vitsivitsy tao aorian'izay dia nisy fety lehibe nanomboka.
Nony hariva niverina avy niasa tany an-tsaha ny zokiny; raha nanakaiky ny trano izy dia nandre hira sy dihy. Nantsoiny ny iray tamin'ireo mpanompo, ary nanontaniany hoe: "Inona ny dikan'izao korana be izao?"
Namaly ilay mpanompo hoe: "Niverina nody ny rahalahinao; ary namono ny zanak'omby matavy indrindra ny dadanareo, satria tafaverina soa aman-tsara tsy maty fo aman'aina izy."
Raha nandre izany ilay rahalahiny dia tezitra mafy, ka nandà ny hiditra ao amin'ilay fety fihinanam-be; nivoaka àry ny rainy, ary niangavy azy hiditra.
Fa izao no navaliny: "Jereo anie ireo taona maro nanompoako anao e, tsy mba nanohitra ny didinao mihitsy aho na iray aza, nefa hianao tsy mba nanao fety mihitsy mba hifaliako miaraka amin'ny namako. Izao anefa miverina ity rahalahiko mpirenireny ity, izay tsy isalasalana fa nandany ny lovany tamin'ny mpivaro-tena, dia novonoinao ny zanak'omby tsara indrindra mba hankalazana izany."
Hoy ny rainy: "Ry zanako ô, teto amiko foana anie hianao e, ary fantatrao fa izay ananako rehetra dia anao. Marina fa manao fankalazana isika, ary manao fisaorana; satria efa maty ny rahalahinao, fa velona indray, efa very, nefa hita izao."9
Raha tsy miova fo hianareo, ka tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tonga ny Zanak'Olona mba hamonjy ireo izay very: fa tsy sitrapon'ny Rainareo izay any an-danitra, ny hahavery na dia ny kely indrindra aminareo aza.10
Fa tena tian'Andriamanitra izao tontolo izao ka nomeny ny Zanany lahy tokana, mba tsy ho very na iza na iza mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay. Mino izany ve hianareo?"11
MPIANATRA SY MPANOMPO
Tsy afaka manaiky tompo roa hanapaka ny fiainanareo hianareo. Na ho halanareo ny iray, ary ho tianareo ilay anankiray ; na koa hifikitra amin'ny iray hianareo, ary hanamavo ilay anankiray . Tsy afaka manompo an'Andriamanitra hianareo sady mijanona ho andevon'ireo andriamanitr'izao tontolo izao.1
Iza aminareo, raha mikasa hanorina tilikambo, no tsy hipetraka aloha ka hanombatombana ny vidiny, manamarina tsara fa ampy hamitana azy ny vola? Raha tsy izany dia mety ataonareo ny fototra dia avy eo tsy maintsy ajanona ilay fikasana. Mety hihomehy anareo ireo izay nanara-maso ny fandrosoanareo, ary hiteny hoe: "Nanomboka nanorina izy, kanefa izao bankiropitra."
Tsy maintsy miara-mipetraka amin'ny mpanolo-tsaina azy momba ny ady aloha ny mpanjaka iray izay te-hiatrika ady, mba handinika raha afaka handresy ny herin'ny fahavalo izay telo alina ny miaramilany iray alina. Raha hitan' ilay mpanolon-tsainy fa tsy afaka handresy izy, dia tsy maintsy handefa ny ambasadaorony izy hivoaka hitsena ny fahavalo, ka hiezaka hanao raharaham-pihavanana alohan'ny anombohan'ny ady ireo.
Noho izany tsy maintsy mandinika aloha ny amin'izay heverinareo ho fanananareo hianareo: dia fianakaviana, vola, fananana ety an-tany. Raha tsy manaiky hanisa ny tombany hianareo, ka hanao fanoloran-tena tanteraka, na dia amin'ireo zavatra ireo aza, dia tsy afaka tena hanaraka Ahy marina tokoa hianareo.2
Mamelà Ahy hampahatsiaro anareo: ny olona izay mazoto amin'ny zavatra kely dia hatokisana amin'ny zavatra lehibe; ary ny olona tsy marina amin'ny zavatra kely dia tsy marina koa amin'ny zavatra lehibe. Raha tsy azo antoka amin'ny harena ety an-tany hianareo, ahoana no hahazoana matoky anareo amin'ny harena ara-panahy? Ary raha tsy nahatoky tamin'ny fananana izay an'ny sasany hianareo, iza no hanome anareo fananana ho anareo manokana?3
Alefako mivoaka tahaka ny ondry eo anivon'ny amboadia: ka hendre tahaka ny bibilava hianareo, fa aoka ho morabe tahaka ny voromailala.4
Efa hitanareo ny fampiharan'ireo mpanjaka sy mpanapaka ety an-tany ny fahefany, sy fanaparany izany amin'ny mahantra izay eo ambany fiadidiany. Tsy marina ho anareo izay an'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Na iza na iza aminareo te ho lehibe, dia tsy maintsy ho mpanompon'ny rehetra aloha. Na Izaho aza, ilay Mesia, tsy tonga ho tompoina, fa hanompo, ary hanome ny aiko ho avotra ho an'ny maro. Raha fantatrareo ireo zavatra ireo, dia ho sambatra hianareo raha mankato izany.5
Mahareta ao amin'ny fahazavan'ny teniko: dia tena ho mpianatro marina tokoa hianareo amin'izany.
Aza manao tahakan'ny olona miseho azy ho tia fivavahana, mamorona lalàna sy didy. Mirehareha amin'ny lalàna nataony izy, nefa tsy manaraka na ny iray amin'izy ireny akory aza. Mametraka enta-mavesatry ny fanarahana ny lalàna amin'ny antsipirihany eo amin'ny vozon'ireo mpanaraka azy izy, kanefa tsy nandalo ao an-tsainy mihitsy ny hanaraka lalàna toa ireny. Misahirana mafy ery izy mba ho hitan'ny olona, manao akanjo hafahafa, manao fombafomba be ery amin'ny fitondrany ny tenany; tiany ny mipetraka eny amin'ny toeran'ny manan-kaja amin'ny latabatra sy eny amin'ny fitoerana eny aloha. Tiany ny antsoina hoe hajaina sy mpampianatra manam-pahaizana. Kanefa tsy tokony antsoina hoe hajaina na mpampianatra hianareo satria tompo iray ihany no anareo, ary rahalahiny sy anabaviny daholo hianareo rehetra.
Halaviro ny miantso olona hoe rainareo ara-panahy; satria manana Ray iray ihany hianareo any an-danitra. Ary aza avela koa hisy olona hiantso anareo hoe mpampianatra manam-pahaizana; satria iray ihany no mpampianatra, dia Kristy. Ny iray izay lehibe indrindra aminareo no tsy maintsy mpanomponareo aloha; ary izay rehetra manetry tena no hasandratra.6
Rehefa hiverina amin'ny voninahiny ny Mesia, ka hiaraka Aminy ny anjeliny masina rehetra, hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny any an-danitra Izy. Hangonina eo anoloany ny firenena rehetra ary hosarahany tsirairairay avy ny olona, tahaka ny anavahan'ny mpiandry ondry ny ondry amin'ny osy. Hapetrany eo an-tànany ankavanana ny ondry, ary ny osy eo ankaviany.
Avy eo hiteny amin'ireo izay rehetra eo an-tànany ankavanana ny Mpanjaka hoe: "Avia ry notahian'ny Raiko; midira amin'ny fandovana ny fanjakana, izay efa voaomana ho anareo hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Fa noana Aho dia nomenareo sakafo. Nangetaheta Aho dia nitondra rano mangatsiaka ho Ahy hianareo hosotroiko. Nivahiny Aho dia nampiantranoinareo. Tsy nanao akanjo Aho dia nampiakanjonareo. Narary Aho dia nokarakarainareo. Tany an-tranomaizina Aho dia novangianareo."
Ary ho talanjona ny marina hamaly hoe: "Tompo ô, oviana no hitanay noana Ianao ka nomenay sakafo; na nangetaheta ka nomenay zavatra hosotroina? Ary oviana Ianao no hitanay nivahiny ka nomenay trano hialofana; na nila fitafiana ka nampiakanjonay? Mba efa hitanay narary ve Ianao ka nokarakarainay; na tany an-tranomaizina ka novangianay?"
Ary hamaly ilay Mpanjaka hoe: "Lazaiko anareo marina tokoa izao, tahaka ny nanaovanareo ireo zavatra rehetra ireo tamin'ny madinika indrindra amin'ny rahalahiko sy ny anabaviko dia efa nanao izany tamiko koa hianareo."
Fa hiteny amin' ireo izay eo ankaviany ny Mpanjaka hoe: "Mialà Amiko! Fa noana Aho dia tsy mba nomenareo sakafo. Nangetaheta Aho fa tsy mba nomenareo zavatra hosotroina. Nivahiny Aho fa noroahinareo. Nitanjaka Aho, fa tsy mba nomenareo akanjo. Narary Aho nefa tsy mba nokarakarainareoo. Tany an-tranomaizina Aho nefa tsy mba novangianareo."
Ary hamaly Azy izy ireo hoe: "Tompo ô! Oviana ianao no hitanay noana, na nangetaheta, na nivahiny, na nitanjaka, na narary, na tany an-tranomaizina ka tsy nampahery anao izahay?"
Hamaly ilay Mpanjaka hoe: "Lazaiko marina tokoa aminareo, isaky ny tsy nanao ireo zavatra ireo tamin'ny madinika indrindra amin'ny rahalahiko sy ny anabaviko hianareo dia tsy nanao izany tamiko."
Ary dia halefa ho any amin'ny maizina mandrakizay izy ireo fa ny marina kosa hampidirina any amin'ny fitoeran'ny fiainana.7
Miantso Ahy hoe mpampianatra sy Tompo hianareo, ary marina izany satria izany tokoa Aho. Raha Izaho aza, Tomponareo sy mpampianatra anareo, manaiky ho mpanompo ambany indrindra, hianareo koa izany tokony hanaiky hifanompo. Nanome ohatra anareo Aho; tokony hanao sahala amin'izay nataoko taminareo hianareo.8
ILAY FANIRAHANA LEHIBE
Aoka ireo izay maty ara-panahy hikarakara ny manahirana azy ety an-tany; fa hianareo mandehana mitory ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao izay miandry izany.1
Misy vokatra be eo anoloanareo; mampalahelo anefa fa vitsy ny mpiasa. Mivavaha amin'ny Tompon'ny vokatra mba handefasany mpiasa bebe kokoa hanangona ny vokany. Tsy misy olona mametraka ny tanany amin'ny angadin'omby dia miherika indray avy eo ka ho mendrika ny fanjakan'Andriamanitra.²
Hanao asa mitovy amin'ny ataoko hianareo izay mino Ahy, ary lehibe lavitra noho izany aza; satria tsy maintsy miverina any amin'ny Raiko any an-danitra Aho. Raha maniry ny hanompo Ahy hianareo, araho Aho; ary izay misy Ahy, ho any koa hianareo izay mpanompoko, ary homen'ny Raiko voninahitra.3
Mandehana, ambarao: "Efa tonga aty aminareo ny fanjakan'ny lanitra."
Sitrano ny marary, avereno amin'ny boka ny fahasalamany; atsangano ny maty; roahy ny demonia! Tadidio izay nolazaiko taminareo: "Maimaim-poana no nandraisanareo izao fiainam-baovao izao. Manomeza maimaim-poana!" 4
Raha tsy miandany Amiko hianareo dia manohitra Ahy; ary izay tsy manangona miaraka Amiko dia manaparitaka.5
Isaky ny asaina hiditra amin'ny trano iray hianareo, manonona fitahiana ary lazao hoe: "Fiadanana ho amin'ity trano ity." Raha momba ny fiadanana ry zareo ao an-trano dia horaisiny ny fiadanana tononinareo ary hahazo tombotsoa amin'izany izy. Raha tsy izany dia hiverina aminareo ny tombotsoa amin'ny fitahiana notononinareo.
Aza misalasala hanaiky ny fampiantranoin'ny olona, kanefa aoka hanana tanjona hianareo, ary tohero ny fandehanana mirenireny foana tsy misy tanjona. Raiso am-pifaliana na inona na inona sakafo na zavatra aroso ho anareo hosotroina, fa izay miasa dia mendrika ny hahazo ny karamany. 6
Ireo izay mandray ny olona irahiko miaraka amin'ity hafatra ity dia mandray Ahy koa, ary ireo izay mandray Ahy dia mandray ny Raiko izay naniraka Ahy.7
Aoka hianareo hampiomanina: misy sasany izay hiezaka hampangina ny feonareo; izay hitondra anareo any amin'ny fitsarana, ary tsy marina no hitondrany anareo, hitady ny handefasana anareo any an-tranomaizina aza. Noho ny hafatro, dia antsoina hijoro vavolombelona eo anatrehan'ireo izay tsy mino hianareo: dia mpanapaka sy governora ary mpanjaka.
Raha endrikendrehina sy entina any amin'ny fitsarana hianareo, dia aza matahotra ny amin'ny tsy fahalalanareo izay teny holazaina. Homena anareo amin'izany fotoana izany ny teny. Tsy ilaina miankina amin'ny teninareo fotsiny ihany hianareo fa ny Fanahin'ny Rainareo no hiteny amin'ny alàlanareo. Tadidio fa amin'ny fanjakana ety an-tany, tsy misy mpanompo lehibe noho ny tompony. Raha nanenjika Ahy ry zareo dia hanenjika anareo koa izy, hosaziany hianareo noho ny Amiko, ary tsy ho azony an-tsaina iza Ilay naniraka Ahy ho amin'izao tontolo izao. Kanefa raha manaiky sy manaraka ny hafatro izy, dia hanaiky sy hanaraka ny anareo koa.8
Raha tsy tonga miaraka amin'ny hafatry ny fahamarinana Aho, dia tsy nahatsapa ny tsy fahatanterahany sy ny fitondran-tenany feno ota ny mponin'izao tontolo izao. Izao anefa izy dia tsy afaka miafina ao ambadik'ilay tsy fahalalany ny fahamarinana taloha. Raha tsy nanao ireo fahagagana miezinezina ireo tamin'izy ireo Aho dia tsy ho tonga saina amin'ny fahadisoany izy. Fa izao ireo izay nandà ny fahamarinana dia nahita ny fahagagana ka mankahala Ahy sy ny Raiko. Tonga izany mba hahatanteraka ny faminaniana hoe: "Halany foana Aho."9
Afo no nahatongavako, ho entina ety an-tany. Tena iriko mihitsy ny hahita azy io hiredareda! Hianareo angaha nieritreritra fa tonga hitondra fiadanana sy filaminana ety an-tany Aho? Tsia, lazaiko aminareo, tonga hitondra fampisarahana Aho: Fa manomboka izao hisy olona dimy ao anaty trano iray, hisaraka amin'izay tokony hinoany, ny telo hanohitra ny roa, ary ny roa hanohitra ny telo.10
Rehefa mifanehitra amin'ny fankahalan'izao tontolo izao hianareo dia tadidio ahoana no nankahalany Ahy talohanareo. Ary rehefa manenjika anareo amin'ny toerana iray izy dia mifindrà amin'ny toerana manaraka. Tsy ho tratranareo daholo akory ny tanàn-dehibe rehetra eran'izao tontolo izao alohan'ny hiverenan'ny Mesia. Raha misy tanàna iray mandà ny handray anareo, na ny hihaino ny hafatrareo dia ahitsano amin'ny tongotrareo ny vovok'izany tanàna izany rehefa miala ao hianareo. Minoa Ahy, amin'ny andron'ny fitsarana farany, ho tsaratsara kokoa ny hanjo ny tanànan'i Sodoma sy Gomora noho izany tanàna izany.11
Raha nanaraka ny fomba fanaon'izao tontolo izao hianareo, ho tia anareo izao tontolo izao. Fa satria manaraka ny fomban'ny fanjakana hianareo, satria niantso anareo ho amin'ny fanjakana Aho dia hataon'izao tontolo izao tsinontsinona sy hankahalainy hianareo. 12
Na iza na iza mandre ny teny izay lazainareo dia mandre Ahy; ary ireo izay manilikilika anareo, satria marina ny teninareo dia manilikilika Ahy. Raha mandà Ahy izy dia mandà ny Ray izay naniraka Ahy. Zakao ny fitsikerana ataon'ireo tsy mino sy ny misalasala noho ny amin'ny anarako. Mijoroa tsara; ho voavonjy hianareo amin'ny fanaovana izany.13
Nolazaiko anareo ireo teny ireo mba hahitanareo fiadanana ao Amiko sy amin'ny fanarahana ny teniko. Hahita fahoriana sy korontana hianareo any amin'izao tontolo izao; fa aoka ho sambatra hianareo satria efa nandresy izao tontolo izao Aho.14
NY VAVAKA NATAON'I KRISTY HO AN'NY MPIANANY
Ray ô, tonga izao ny ora. Omeo voninahitra ny Zanakao mba hahafahany mitondra ny voninahitra ho Anao; fa efa nomenao fahefana amin'ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra eto ambonin'ny tany Izy mba hahafahany manome fiainana mandrakizay ho an'ireo izay nomenao azy.1
Ary izao no fiainana mandrakizay: ny ahalalany Anao ilay Andriamanitra tokana marina sy Jesosy Kristy izay nirahinao. Nanome voninahitra Anao Aho tety an-tany tamin'ny nanatanterahako ny asa izay nomenao hataoko. Amin'izao fotoana izao Ray ô, asehoy ny voninahitro raha mitsangana eo anatrehanao Aho, dia ilay voninahitra nananako niaraka taminao hatramin'izay talohan'ny fiandohan'izao tontolo izao. Anao ireo ary nomenao Ahy, ary nanaiky ny tenin'ny fiainana mandrakizay nomenao izy. Efa fantany izao fa ny zavatra rehetra nomenao Ahy dia avy Aminao. Nampitaiko taminy amin'ny fomba mahatoky izay nomenao Ahy; nino Ahy izy ary nanjary fantany tao am-pony fa avy amin'Andriamanitra Aho, nirahanao ho amin'izy ireo.
Tsy mivavaka ho an'izao tontolo izao Aho, fa ho an'ireo izay nomenao Ahy; satria Anao tokoa izy ireo. Ireo izay rehetra nino Ahy dia Anao; ary manaja Ahy izy. Hiverina ho any Aminao ho any an-danitra Aho; fa ireo izay mino Ahy dia mijanona aty aoriana. Ray ô, tehirizo ireo amin'ny herin'ny anaranao; mba ho iray izy tahaka ny maha iray Antsika.
Raha mbola niaraka taminy teto amin'izao tontolo Aho dia notehiriziko amin'ny hery izay nomenao Ahy izy; nambenako izy ireo ary tsy nisy very na dia iray aza, afa-tsy ilay zanaky ny fandringanana, mba hahatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Hankany aminao Aho izao; fa ireto zavatra ireto no angatahiko raha mbola ety ambonin'ny tany Aho mba hahatsapan'izy ireo sy handraisany ny fanambarana feno ny amin'izay azy.
Nomeko azy ireo ny teninao ary halan'izao tontolo izao izy satria tsy zanak'ity izao tontolo izao maizina sy eo an-dalam-paharavana ity intsony izy, tahaka ny tsy maha zanany Ahy. Tsy mangataka Aminao ny hanesoranao azy amin'izao tontolo izao Aho fa ny hitehirizanao azy ireo arovanao amin'ilay ratsy; fa tsy zanaky ny maizina intsony izy tahaka ny tsy maha-zanany Ahy. Hamasino amin'ny fahamarinanao ireo; fa ny teninao no fahamarinana.
Tahaka ny nanirahanao Ahy ho amin'izao tontolo izao, tahak'izany koa no anirahako azy ho amin'izao tontolo izao. Ary ho an'izy ireo no anokanako ny tenako mba hahatonga azy ho hamasinina sy hitombo ao amin'ny fahamarinana. Tsy ho an'ireo ihany no hivavahako fa ho an'ireo mpino amin'ny ho avy izay ho tonga ka hino Ahy noho ny fijoroana vavolombelona izay ataony. Aoka izy ireo ho iray fo sy fanahy, tahaka ny maha iray Ahy sy Hianao: ka tahaka ny maha ato Amiko Anao ary Izaho ao Aminao, ho ao Amintsika izy; ary ho fantatr'izao tontolo izao fa Hianao no naniraka Ahy.
Nomeko azy ny voninahitra izay nomenao Ahy mba ho iray izy ireo tahaka ny maha iray Antsika: Izaho ao aminy, ary Hianao ato Amiko, tonga amin'ny fahatanterahana ho iray, mba hahalalan'izao tontolo izao mihitsy amin'ny alalan'izany fa Hianao no naniraka Ahy sady tia azy ireo tahaka ny nitiavanao Ahy. Enga anie indray andro any ka hiaraka Amiko any amin'izay misy Ahy izy ireo, hibanjina ny voninahitro izay nomenao Ahy tamim-pitiavana hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao.
Ry Rain'ny fahatsarana sy ny fahamarinana ô, tsy nahalala Anao izao tontolo izao; fa Izaho efa nahalala Anao, ary ireo izay mino Ahy, mahafantatra izao, fa Hianao no naniraka Ahy. Efa nasehoko azy ireo Hianao ary hotohizako ihany ny fanehoako Anao amin'izy ireo mba hitoeran'ny fitiavanao Ahy ao anatin'ny fony ary mba hahatonga Ahy hipetraka ao koa. Ho tanteraka anie izany.²
ILAY FIANTSOANA HO AMIN'NY FIAINAM-BAOVAO
Ilay Fiantsoana 1. Jaona 15:16, 2. Marka 10:18-22, 3. Matio 16:24,25, 4. Matio 22:2-14; Marka 1:15; Jaona 15:19, 5. Jaona 6:44,37, 6. Jaona 1:50, 7. Matio 7:13,14; Lioka 13:24
Ny Amin'ny Fahaterahana Fanindroany Indray 1. Jaona 3:7, 2. Jaona 3:3,5, 3. Jaona 3:6,8, 4. Matio 9:16,17, 5. Jaona 3:10,12, 6. Jaona 3:17,18, 7. Jaona 11:25,26,40, 8. Jaona 4:34; 6:29, 9. Lioka 15:11-32, 10. Matio 18:3,11,14, 11. Jaona 3:16; 11:26
Mpianatra sy Mpanompo 1. Matio 6:24, 2. Lioka 14:28-33, 3. Lioka 16:10-12, 4. Matio 10:16, 5. Marka 10:42-45; Jaona 13:17, 6. Jaona 8:31; Matio 23:2-12, 7. Matio 25:31-46, 8. Jaona 13:13-15
Ilay Fanirahana Lehibe 1. Lioka 9:60, 2. Lioka 10:2; 9:62, 3. Jaona 14:12; 12:26, 4. Matio 10:7,8, 5. Matio 12:30, 6. Lioka 10:5-7, 7. Jaona 13:20, 8. Matio 10:17-20; Jaona 15:20,21, 9. Jaona 22:25; Salamo 35:19, 10. Lioka 12:49-53; Matio 10:21, 11. Matio 10:23,14,15; Jaona 15:18, 12. Jaona 15:19, 13. Lioka 10:16; Matio 10:22, 14. Jaona 16:33
Ny Vavaka Nataon'i Kristy ho an'ny Mpianany 1,2. Jaona 17:1-26